Xildhibaano Iyo Aqoonyahano Ka soo Jeeda Gobolka Hiiraan oo Kulan yeeshay Muqdisho – SBC
Xildhibaano Iyo Aqoonyahano Ka soo Jeeda Gobolka Hiiraan oo Kulan yeeshay Muqdisho
Posted by Webmaster on April 23, 2012 Comments
Kulankani oo ka dhacay Magaalada Mugdisho ayaa waxa ka soo qeybgalay aqoonyahanada ka soo jeedo Beesha jijeele iyadoo kulankasina loga hadlayay siddii loo hormarin lahaa degmoyinka Farlibax Iyo Qurac Joome oo dhawaantani loo magacabay in ay noqdaan degmo.
Ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay Dr:Cabdullahi Aadam muuse oo u mahadceliyay Xildhibaan Cabdullahi Aadam Maxamed(Farey) dadaalka dheeraadka ah ee u galay in la magacaabo degmoyinkani,waxana u sheegay in aqoonyahanada beesha Jijeele ay diyaar u yahiin waxii manta ka dambeyo in ay ka shaqeyaan una dhabar adegan in siddii loo hormarin lahaa kaabayasha nolasha ay degmoyinka si sare looga qaado nolasha dadweynaha ku dhaqan degmoyinkas.
Xildhibaan Cabdullahi adam Maxamed (Farey) oo isna kulankani ka hadlay ayaa tilmaamay in dadaal aan kala harsi lahayn u u galay in la magacaabo degmoyinkaas maanta waxii ka dambeyana uu diyaar u yahay inu sii wada dadaalkiisa ku aaday hormarinta degmooyinkaas,waxana uu tilmaamay in ay mas’uuliyad ay ka saarantahay hormarinta degmooyinkas madama uu ku metalo xildhibaanimada magaca dadweynaha Deegaanadaasi .
Kulanki ayaa ugu dambeyntii waxaa soo hadalka soo xiray Maxamed derow Cabdulle oo ugu baaqay dhammaan jaaliyada beesha jijeele ee ku dhaqan Yurub Iyo Ameerika in ay gacan ka geystaan hormarinta degmoyinkaas.
Kulankani ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyadoo lagu balamay kulamo xiga oo looga hadlaya hormarinta dhammaan deeganada ay degto Beesha Jijeele.
Anigo kamid ah dhalinta qurbo jogta e besha jijele ayan waxan ad u gu mahad celinaya xildhibanka iyo aqoyahanada ohalganty arinkan
asc walalayaal ardayda kunool qurabaha ka na soo jeedo yaquub, yaquub iyi jijeele ila qarni ayee wada’dagaan waa lasocdaa , inkasto nasabkeena iyo dhiigeeyna uu yahay asalkeena abgal cusman mudulood, oabakar gabane, maxamad xasan yaquub, lakiin walalaheeyna aan ladagno iyo abtiyaasheeyn waan ku faraxsanahay hormarka farlibaax iyo quracjoome
Yusuf Aw Hussein Saifulah says:
Walaalkaan Yacquub la yiraahdo ee u haysta Yacquub inuu yahay Abgaal waxaay la mid tahay Isaaqii yiri waxaanu nahay reer benu israel, si aqoonsi ugu helaan gaalada caalamka, marka walaalkaan iyo walaalo badan waxaan udardaarmayaa abtir aan abtirkaaga aheyn hadaad ku abtirsata waa lagu cadaab galaa ee ogaada.
mahad c/ dheere says:
Mansha allah ma aha in wax la kala qad qado hadii ay meshu talo wax aan wado qabsano
aqoonyahanada waxgarad ka odoyaasha xildhibanad uqaasha wan idiin salamay mideda kale hadii wax lawada qabanayo halfar hala ahaado cafwan arin kane ha laga dhigin qowda maqal sii waxna haka qaban wabilaahi towfiiq ASC